8 June- Maalinta caalamiga ee badweynta | Radio Himilo
Home / Deegaan / 8 June- Maalinta caalamiga ee badweynta
8 June- Maalinta caalamiga ee badweynta
Posted by: Mahad Mohamed June 8, 2020
Himilo – Maalinta badweynta dunida waxaa markii ugu horreysay lagu dhawaaqay 8-dii bishii June sannadkii 1992 shir ka dhacay magaalada Rio de Janeiro oo barbar socday shirkii Qaramada Midoobay ee deegaanka iyo horumarinta (UNCED) kaasi oo noqday fursad ay ururada aan dowliga aheyn ku cabbiri karaan aragtidooda ku saabsan arrimaha deegaanka.
Qaramada Midoobay ayaa u asteysay 8-da June inay noqoto maalinta badweynta caalamiga ah. Dalal badan ayaa xusa maalintan tan iyo sannadkii 1992-dii kaddib shirkii Qaramada Midoobay ee deegaanka iyo horumarinta.
Maanta oo kale, waxaa loo arkaa fursad kor loogu qaadi karo fahamka caalamiga ah ee ku saabsan faa’iidada bini’aadamka uu ku qabo badaha waaweyn iyada oo la iftiiminayo mas’uuliyadda la xiriirta ilaalinta nafleyda ku nool.
Dhacdooyinka kala duwan ayaa lagu qabanayaa ku dhawaad 15 dal oo dunida ah. Waxaa ujeedku yahay in la muujiyo khatarta ku socota badweynta iyo sida ay muhiim ugu tahay nolosheenna.
Previous: Neymar oo aan wali ka rajo dhigin ku laabashada Barcelona
Next: Leicester City oo lacag rikoor ah ku dalbaneysa Ben Chilwell